Desogestrel Powder For Sale (54024-22-5): Falanqaynta & Qiyaasta iyo Saameynta | AASraw
/blog/Desogestrel/Desogestrel Powder For Sale: Faahfaahinta & Qiyaasta & Saameynta
Posted on 06 / 28 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray Desogestrel. Waxay leedahay 0 Comment.
Wax kasta oo ku saabsan Powder Desogestrel
2.Desogestrel Dib u Eegista Budada
3. Mechanism of Action-Desogestrel budada
4.How si aad u isticmaasho budada Desogestrel?
5. Desogestrel Foosto
6.Wuxuu isticmaali karaa budada Desogestrel?
7. Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka - Desogestrel Powder
8.Desogestrel Waxyeelada Xiiqda
9.Desogestrel Waxtarka budada ah marka naasnuujinta
Nooca Molecular: C22H30O
Desogestrel iyo isku dhafka etnil estradiol waxaa loo isticmaalaa si looga hortago uurka. Kani waa kiniinka ilaalinta dhalmada oo ka kooban laba nooc oo hoormoon, desogestrel iyo etinyl estradiol, iyo marka si habboon loo qaato, waxay ka hortagtaa uurka. Waxay ka shaqeysaa iyada oo joojinaysa ukumaha haweenku si buuxda u bilawday bil kasta. Ukunta ayaa mar dambe aqbali karta shahwada iyo bacrinta (uurka) laga hortago.
Habka ka hortagga uur-qaadidda ma ahan boqolkiiba 100. Hababka xakameynta dhalmada sida qalliinka si aad u noqoto mid nadiif ah ama aan galmo ahayn ayaa ka waxtarka ka ah kiniinka ilaalinta dhalmada. Kala hadal fursadahaaga ku saabsan xakameynta dhalashada ee dhakhtarkaaga.
Dawadani kama horjoogsan karto infakshanka HIV ama cudurrada kale ee la isugu gudbiyo galmada. Kama caawineyso sida uurqaadida degdegga ah, sida ka dib markaad xiriir la sameysid galmada aan la ilaalinaynin. Daawadani waxaa la heli karaa kaliya dhakhtarkaaga.
2. Dib-u-eegista "Desogestrel Powder"
Product Name Duufaanta Desogestrel
Formula kelli C22H30O
Miisaanka kelli 310.47
3. Mashruuca Of Action—Desogestrel Powder
Waxay ku xidhan tahay dukaamada progesterone iyo estrogen. Unugyada bartilmaameedka ah waxaa ka mid ah habka dheddig-jinsiga ee haweenka, qanjidhada naasaha, hypothalamus, iyo pituitary. Marka la xakameynayo qolofta, progestins sida desogestrel ayaa yarayn doonta inta jeer ee sii deyneysa gonadotropin sii deynaya hormoonka (GnRH) ee hypothalamus iyo cirridka horey u-fuuq baxa (Luteining hormone).
Desogestrel waxaa loo isticmaalaa uurqaadis haween ah. Desogestrel waa barnaamij progestin ah ama qaab dabiici ah oo ka mid ah hormoonada haweenka ee dabiiciga ah, progesterone. Dumarka caadiga ah ee haweenka, ukunta oo soo baxa oo laga sii daayo ugxan-sidaha (ugxun). Dhalida ka dib waxay soo saartaa progesterone, ka hortagida sii deynta ugxanta dheeraadka ah iyo ka soo horjeeda maqaarka ilma-galeenka ee uurqaadida suurtagalka ah. Haddii uurku dhaco, heerarka progesterone ee jirka ayaa weli sarreeya, ilaalinta maqaarka ilmaha. Haddii aan uur laheyn, heerarka progesterone ee ku dhaca jirka, waxay keeneysaa caadada. Desogestrel wuxuu u hoggaansamaa geedi socodka jirka si uu u fekero in ugxantu ay horay u dhacday, iyada oo la ilaalinayo heerarka sare ee progesterone. Tani waxay ka hortagtaa sii deynta ugxansidaha ugxan-sidaha.
4. Sidee loo Isticmaalaa Mashiinka Desogestrel?
Aad ayey muhiim u tahay inaad u isticmaasho dawadan sida uu dhakhtarku kuu sheegay. Ha isticmaalin wax badan oo ka mid ah, ha u isticmaalin marar badan, oo ha u isticmaalin wakhti ka badan inta dhakhtarkaagu amro.
Si aad u isticmaasho ka-hortagga uur-qaadidda ee afka oo ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo, waa inaad fahamtaa sida iyo goorta la qaadanayo iyo saameynta laga yaabo in la filayo.
Dawadani waxay la socotaa tilmaamaha bukaanka. Akhriso oo raac fariimahaas si taxadar leh. Weydiiso dhakhtarkaaga ama farmashiistaha haddii aad su'aalo qabto.
Daawadani waxaa lagu heli karaa baakidhka maqaarka oo leh kiniinka kiniiniga. Baakad kasta oo bac ah waxaa ku jira kiniinada 28 leh midabyo kala duwan oo u baahan in la qaato si isku mid ah sida lagu faray baakadka bacda.
Markaad bilowdo isticmaalka dawadan, jidhkaaga ayaa u baahan doona ugu yaraan maalmo 7 si loo saxo kahor inta aan xaamilada laga hortagin. Isticmaal habka labaad ee ka-hortagga uurka (sida, cinjirka, raajada, ama diaphragm) maalmaha ugu horeeya ee 7 ee kaniiniyada wareegga koowaad.
Qaado DesogestrelBudada isla waqtigaas maalin kasta. Kiniinada xakameynta dhalmada ayaa si fiican u shaqeeya marka aan ka badnayn saacadaha 24 inta u dhaxeysa qiyaasaha.
Ha ka boodin ama dib u dhigin qaadashada kaniinigaaga wax ka badan saacadaha 24. Haddii aad seegto qiyaasta, waxaad yeelan kartaa uur. Weydiiso dhakhtarkaaga qaabab kaa caawiya inaad xasuusato inaad qaadato kaniiniyada ama isticmaalka hab kale oo lagu xakameyn karo dhalashada.
Waxaa laga yaabaa inaad dareento xanuun ama lalabo, gaar ahaan bilaha ugu horeeya ee aad qaadato dawadan. Haddii lalabadaadu joogto tahay oo aanad tagin, wac dhakhtarkaaga.
Raac tilmaamaha ku yaal bukaan-socodka bukaan-socodka ama wac dhakhtarkaaga haddii aad matagaysid ama aad shubayso 3 ilaa saacadaha 4 ee qaadashada daawadan. Ku daawee sida tan la waayo.
Ha cunin cuntada digaaga ama cabitaanka casiirada adoo isticmaalaya daawadan. Grapefruit iyo miir-glayga ayaa laga yaabaa inay isbedelaan qadarka daawadan ee ku jira jirka.
Qiyaasta daawadani way ka duwanaan doontaa bukaanada kala duwan. Raac tilmaamaha dhakhtarkaaga ama tilmaamaha ku qoran calaamadda. Macluumaadka soo socda waxaa ku jira kaliya qiyaasta qiyaasta daawadan. Haddii qiyaastaadu ka duwan tahay, ha baddalin haddii uusan dhakhtarkaagu kuu sheegin sidaas.
Qadarka daawada ee aad qaadato waxay kuxirantahay xoogga daawada. Sidoo kale, tirada qiyaasaha aad qaadato maalin kasta, wakhtiga loo oggol yahay inta u dhaxeysa qiyaasta, iyo muddada aad qaadanayso dawada waxay ku xiran tahay dhibaatada caafimaad ee aad u isticmaasho daawada.
Dhakhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu ku weydiisto inaad bilowdo qiyaastaada maalinta ugu horeysa ee caadadaada (oo lagu magacaabo Maalinta 1) ama Axadda ugu horreysa kaddib marka caadadaadu bilowdo Bilowga Axad). Markaad bilowdo maalin gaar ah waxaa muhiim ah in aad raacdo jadwalka, xitaa haddii aad seegto qiyaasta. Ha isku beddelin jadwalka adiga keligaa. Haddii jadwalka aad isticmaashid ma aha mid sahlan, la hadal dhakhtarkaaga wixii ku saabsan bedelida. Bilowga Axad, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho nooc kale oo ka mid ah xakameynta dhalmada (sida, kondhom, diaphragm, spermicide) maalmaha ugu horeeya ee 7.
Waa inaad bilowdaa xigaaga iyo dhamaan xannaanooyinka 28 ee maalinta daaweynta isla maalintaas asbuuca sida ugu dhaqsaha badan bilaabay oo raacaya jadwal isku mid ah.
Qaabka daawada qiyaasta (kiniiniga):
♦ Ka hortaga uurka (si looga hortago uurka):
• Qaangaar iyo dhalinyaro-Hal kiniin ah oo kaniiniga ah (firfircoon) oo la qaato waqti isku mid ah maalin kasta 21 maalmo isku xiga oo ay ku xigto hal kiniini oo cagaaran ah (sabar) maalin kasta 7 maalmaha caadada ah.
• Carruurta-Isticmaalka iyo qiyaasta waa in ay go'aamin dhakhtarkaaga.
Wac dhakhtarkaaga ama farmashiistaha wixii talooyin ah. Daawadani waxay leedahay tilmaamo bukaan oo gaar ah oo ku saabsan waxa la sameeyo haddii aad seegto qiyaasta. Akhri oo raac fariimahaas si taxadar leh u wac dhakhtarkaaga haddii aad wax su'aalo ah qabtid.
Isticmaal habka labaad ee xakameynta dhalashada ee 7 ka dib markaad seegto qiyaasta si looga hortago uurka.
U hubso in dhakhtarkaagu ogaado haddii aad seegto 2 bilahaada oo isku xigta, sababtoo ah taasi waxay noqon kartaa inaad uur leedahay. Laga yaabee inaadan haysanin mudo bil bil ah haddii aad ka maqnayd wax ka badan hal qaadasho ama aad bedesho jadwalkaaga.
Waxaad yeelan kartaa dhiig-bax aad u daran ama haddii aad qaadanaysid kaniiniga wakhtigeeda. Kiniinnada ka badan ee aad maqan tahay, waxay u badan tahay inaad dhiigbaxayso.
❖ Haddii aad seegto hal kiniin ah midabka fudud: Kiniinka u qaado sida ugu dhakhsaha badan uguna qaado kiniinka xiga ee jadwalka caadiga ah.
♣ Haddii aad ka maqnayd laba kiniin oo kiniiniga ifilada ah toddobaadkii 1 ama 2: Qaado laba kiniiniga sida ugu dhakhsaha badan iyo labada kiniini ee kiniinka ah maalinta xigta. Sii wad inaad qaadato hal kiniin ah maalin kasta ilaa aad dhammeysato baakadka. Isticmaal xakameyn labaad oo ah xakameynta dhalmada (sida, cinjirka, jeermiska) maalmo 7 ka dib markaad seegto qiyaasta.
♣ Haddii aad ka maqnayd laba kiniin oo kiniin ah oo liin leh toddobaadkii, ama haddii aad ka maqnaanaysid saddex ama kabadan kaniiniyada liin-da leh todobaad kasta:
♦ Maalinta Maalinta 1: Ka saar baqshadda inteeda kale ka dibna billow baakad cusub isla maalintaas.
♦ Bilawga Bilawga: Sii wad inaad qaadato hal kiniin ah maalin ilaa Axadda, ka dibna tuur bakhaarka intiisa kale oo ku bilaw khariid cusub isla maalintaas. Isticmaal habka labaad ee dhalmada (sida, kondhom, jeermis dilaha) maalmaha 7 ka dib markaad seegto qiyaasta, si looga hortago uurka. Haddii aad seegto caadadaada 2 oo isku xiga, ka hubi dhakhtarkaaga maxaa yeelay waxaad uur leedahay.
❖ Haddii aad seegtid mid ka mid ah toddobada kiniiniga cagaaran todobaadkii 4: Iska tuur kaniiniyada aad ka maqan tahay. Sii wad inaad qaadato hal kiniin ah maalin kasta ilaa aad dhammeysato baakadka.
6. Yaa isticmaali kara Djslbudada?
Dumarka intooda badani waxay isticmaali karaan budada dhoobada ah, laakiin waxaa laga yaabaa inaadan awoodin haddii:
♦ waxay u maleyneysaa inaad uur leedahay
◆ aadan rabin in aad isbedesho
♦ qaado daawooyin kale oo saameyn kara kiniinka
◆ samee dhiigbax aan la garanayn inta u dhaxaysa muddooyinka ama galmada kadib
♦ waxay sameeyeen cudurada wadnaha ama wadna xanuun ama istaroog ku dhacay
♦ qabo cudur beerka ah
◆ kansarka naasku ku dhaco ama horey u soo qaadatay
◆ aad qabto cirrhosis daran ama buro beerka
♦ Haddii aad caafimaad qabto oo aysan jirin sababo caafimaad sababtoo ah inaadan qaadanin budada desogestrel, waxaad qaadan kartaa illaa inta dhalmadaada ama ilaa iyo inta aad tahay 55.
Dufanka desogestrel waa ammaan in la isticmaalo haddii aad naas-nuujinayso. Qadar yar oo ah desogestrel ayaa u gudbin kara caanaha naaska, laakiin tani maaha wax halis ah ilmahaaga. Wax saameyn ah kuma yeelaneyso habka caanaha naaska loo soo saaro.
Inkasta oo ay tahay mid aan macquul ahayn, waxaa jira fursad aad u yar oo aad uur leedahay inta aad qaadaneysid budada duufanta.
Haddii tani dhacdo, ma jirto wax caddayn ah in kaniinigu waxyeello u geli karo ilamahaaga aan weli dhalan. Haddii aad u maleyneyso inaad uur leedahay, la hadal GP-gaaga ama booqo kiliinikadaada kahortaga xaafaddaada.
Raadso talobixin caafimaad haddii aad leedahay calool xanuun degdeg ah ama aan caadi ahayn calooshaada, ama haddii mudada aad ka gaaban tahay ama aad ka yar tahay sida caadiga ah. Waxaa macquul ah in kuwani ay yihiin calaamado digniin ah oo uur qaadasho ah, inkastoo tani ay dhif tahay.
ma joojiso galmada waxaa laga yaabaa inaadan lahayn mudo joogto ah intaad qaadaneyso - caadooyinkaagu waxay noqon karaan kuwo fudud, badanaa, ama joojin kara wadajir, waxaana laga yaabaa in aad uureysid inta u dhaxaysa muddooyinka
waxaad isticmaali kartaa markaad naaska nuujineyso ma kaa difaaceyso STIs
waa faa'iido leh haddii aadan qaadan karin hormoonka hormoonka, kaas oo ku jira kiniinka la xoojiyey, booga ka hortagga uur-qaadista iyo giraanta siilka waxaad u baahan tahay inaad xasuusato inaad qaadato waqti ama waqti isku mid ah maalin kasta
waxaad u isticmaali kartaa da 'kasta - xataa haddii aad sigaar cabto oo aad ka badan tahay 35 daawooyinka qaarkood, oo ay ku jiraan qaar (aan caadi ahayn) antibiotics, waxay ka dhigi kartaa mid wax ku ool ah
8. Dhibaatooyinka Sideedka Powder
Jooji isticmaalka kaniiniyada xakameynta dhalmada oo wac dhakhtarkaaga markiiba haddii aad:
♦ calaamadaha istaroogga - kabuubyo lama filaan ah ama daciifnimo (gaar ahaan hal dhinac oo jidhka ah), madax xanuun daran oo degdeg ah, hadalka hadalka, dhibaatooyinka xagga aragtida ama dheelitirka;
♦ calaamadaha dhiig-xinjirowga ku jira xanuunka feedhaha, qufac deg-deg, hargab, neefsasho degdeg ah, dhiig qufac;
♦ calaamadaha dhiig-xinjirowga ku jira lugtaada, bararka, diirimaadka, ama casaanka hal ama labada lugood;
♦ calaamadaha weerarka wadnaha-xanuunka xabadka ama cadaadiska, xanuunka ku faafaya daankaaga ama garabkaaga, lalabada, dhidid;
♦ dhibaatooyinka beerka-xanuunka caloosha oo daran, qandho, dareemid daal, cunto xumo, kaadida madow, saxarada cagaarka ah, cagaarshow (maqaarka maqaarka ama indhaha);
♦ isbedelka qaabka ama darnaanta madax xanuunka madax xanuunka;
♦ inaad barareyso gacmahaaga, canqushyada, ama cagaha;
♦ buro naaska; ama calaamadaha dhibaatada hurdo-hurdo, daciifnimo, dareen daal, isbedel niyadda.
♦ dhiig-baxa hoosta ama hoos u dhaca;
♦ lalabbo (gaar ahaan marka aad marka hore bilowdo inaad qaadato dawadan), matag, kufin;
♦ isbeddelka miisaanka ama cuntada;
♦ naasaha ama bararka naasaha;
♦ lafdhabarta ama hoos u dhacaya maqaarka wajiga, korodhka timaha, luminta timaha;
♦ madax xanuun; ama cuncun cuncun siilka ama dheecaanka hoosta.
9. Desogestrel Powder Effects halka Naasnuujinta
(1) Saameynta dhalaanka naaska nuugay
Daraasad aan la ogeyn, oo aan la ogeyn oo lagu barbardhigay budada dufanka ceogestrel 75 mcg oo keliya maalin kasta (n = 42) qalabka isgoysyada (IUD; n = 40) wuxuu bilaabay 28 ilaa 56 maalmo kadib dhalmada ka hor tagga. Looma helin kala duwanaansho dhererka ilmaha, miisaanka ama wareegga madaxa ee loo yaqaan 'head of the head of the head' ka dib xannuunada daaweynta 1, 4, iyo 7. Kala-wareegga naas-nuujinta ee ku-meel-gaadhka ah ayaa lagu soo warramey ilamaha 2 iyo dhididka dhaadheerka ayaa lagu soo warramey ilamaha 1 ee ku jira budada desogestrel, marka la barbardhigo wax saameyn ah oo aan laga soo sheegin dhalaanka kooxda IUD. Kobaca carruurta qaarkood ayaa mar kale lagu qiyaasay sanooyinka 1.5 iyo 2.5; lama helin khilaafyo caafimaad oo muhiim ah.
Naas-nuujinta (xaddiga aan la sheegin) timaha timaha ee ilma-galeenka ah ee xNUMX ee da'doodu tahay. Hooyadiis ayaa heshay progestin, dydrogestrone, inta lagu guda jiro seddexda bilood ee ugu horreysa ee uurka iyo bilaabay qaadashada budada desogestrel mg 0.075 maalin kasta sida ka-hortagga uur-qaadidda bilowga 3 da'da dhalmada ka dib. Hooyadiisa ayaa joojisay budadii Desogestrel ka dib markii 28 maalmaha iyo timaha Mucjiso lagu xalliyo by 11 bilo da'da. Duuqu Desogestrel wuxuu ahaa suurtagal ah inuu keeno koritaanka timaha ee xoqan ee ilmaha yar.
(2) Saamaynta ku saabsan nuujinta iyo caanaha naaska
Daraasad aan la ogeyn, oo aan la ogeyn oo la barbardhigay budada ceogestrel-ka ee xNUMX mcg oo keliya maalin kasta (n = 75) qalab gardaro ah (n = 42) wuxuu bilaabay 40 ilaa 28 maalmood kadib dhalmada ka hortagga uurka. Inta lagu jiro xilliga tijaabada 56 ee bilawga ah, haweeney 7 ah ayaa ka baxday maxkamad sababtoo ah nuujinta hoos u dhigtay marka la barbar dhigo midkoodna kooxda IUD. Dhamaadka wareegga koowaad iyo afaraad ee daweynta, ma jirin farqi u dhexeeya cadadka caanaha laga soo saaro budada desogestrel iyo kooxaha IUD. Kala duwanaansho la'aanta cudurka triglyceride, borotiinka ama caanaha naaska ee caanaha ayaa laga helay dhammaadka 1, 1, iyo 4 wareegyada daaweynta.
Daraasad aan la ogayn ayaa raacday haweenka 200 oo la siiyey dumarka uurka leh ee loo yaqaan 'desogestrel p-stemept' 75 oo ah bil kasta 6 laga bilaabo 6 isbuucyo kadib oo lagu barbardhigay dumarka 200 ee qaata placebos. Looma helin wax isbeddel ah oo ku yimid xaddiga wax soo saarka caanaha ama koritaanka ilmaha iyo horumarka u dhexeeya labada kooxood.
(1) ilo kale oo laga helo alaab-bixiyayaasha Desogestrel Powder
(2) Soo iibso Desogestrel Powder hadda
♦ Google AASraw, waxaad gashaa www.aasraw.com.
♦ Raadi Desogestrel Powder on AASraw
♦ Soo hel Desogestrel Powder daaqadaha XP, oo qor qoraaladaada.
♦ Waxaan helnaa emailkaaga oo kaala hadal faahfaahin dheeraad ah.
◆ Xaqiiji amarka, ka dibna bixinta lacag bixinta, waxaanu kuu qaban doonaa badeecadaha wax soo saarka ee dambe.
(3) Soo iibsiga iibka Desogestrel Powder AASraw
1. Tayada Sare Qiimaha tartanka:
1) Nadaafad:> 99%
2) Waxaanu nahay soo saaraha waxaanna bixin karnaa waxyaabo tayo sare leh qiimaha warshadaha.
2.Fastiga iyo Badbaadinta Badbaadada:
1) Qashinka waxaa loo diri karaa saacadaha 24 kadib bixinta. Raadinta lambarka la heli karo
2) Xogta hubinta iyo qarsoodiga ah. Hababka kala duwan ee gaadiidka ee doorashadaada.
3.Waxaan Macaamiil Muujiyaan Dunida Dunida:
1) Adeega xirfad leh iyo waayo-aragnimo hodan ah ayaa macaamiisha dareensiisaa in ay fududahay, saamiyo ku filan iyo bixinta dhakhso ah waxay la kulmaan rabitaankooda.
2) Jawaabta suuqa iyo jawaab celinta alaabooyinka waa la qiimeeyn doonaa, shuruudaha macaamiisha kulanka waa masuuliyadeena.
3) Qiime tayo sare leh, qiimaha tartanka, bixinta degdegga ah, adeegga fasalka koowaad wuxuu helayaa kalsoonida iyo ammaanida macaamiisha.
1) Gaadiid badbaado leh: Kala duwanaanta kanaalka, ilaalinta asturnaanta macaamiisha. Kaddibna, hubi inaad dib u soo celiso.
2) Marna isbeddel: Waxsoosaarku had iyo jeer waa inuu ilaaliyaa nadiifnimada sare, ma beddeli doono, Tayada sare waa dhaqanka shirkadeena.
3) Adeegyo wanaagsan: Sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si loo xaliyo dhibaatooyinka macaamiisha, si macaamiisha u helaan alaab ammaan ah.
Tags: iibso budada Desogestrel, Duufaanta Desogestrel
Tani Waa Wax Walba Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Bortezomib Sidee Muun 4-DHEA U Noqon Doonaa Testosterone?